डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना दिँदा प्रतिक्रिया आयो–बल्ल घैंटामा घाम लागेछ
Thu, Jul 19, 2018 | 20:39:02 NST
काठमाडौं, पुस २७ – दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि पृथ्वी जयन्ती मनाउने परम्परा मात्रै तोडिएन, सडकका चोकचोकमा रहेका शालिक ढलाउने काम समेत भयो ।
शालिक ढलाउने र तोडफोड गर्ने काममा तत्कालीन माओवादीका नेता कार्यकर्ता बढि जिम्मेवार भएको आरोप पनि लाग्यो । शालिक ढलाउने काम गलत हो र पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ भन्ने आवाज बिस्तारै उठ्न थाल्यो । सरकारी स्तरबाट नमनाएपनि वर्सेनि पुस २७ गते नागरिकस्तरबाट पृथ्वी जयन्ती मनाउन थालियो ।
पृथ्वी जयन्तीको पक्षमा अहिले यतिधेरै जनमत बढ्न थाल्यो कि यसवर्ष सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दियो । पहिले पृथ्वी जयन्तीको विपक्षमा रहेका नेता कार्यकर्ताले समेत शुभकामना दिन थाले । तत्कालीन माओवादीका नेता र अहिलेका नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ट्वीटरमार्फत पृथ्वीजयन्तीको शुभकामना दिनुभएको छ ।
२९६औं पृथ्वीजयन्तीको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक वधाइ तथा शुभकामना! पृथ्वीनारायण शाहलाई अठारौं शताब्दीको ऐतिहासिक परिस्थितिको सापेक्षतामा सबै नेपालीले सकारात्मक ढंगले मूल्यांकन गर्दै एकीकृत नेपाललाई सबै जातजातिको साझा फूलवारी बनाउने संकल्प गरौं! (फोटो साभार: गूगल्स) pic.twitter.com/DPbygl4LpT
— Baburam Bhattarai (@brb1954) January 10, 2018
भट्टराईका अरु ट्वीटमा जस्तै यसमा पनि धेरैले आलोचना गरेका छन् । बल्ल घैंटोमा घाम लागेछ भनेर खुशी व्यक्त गर्नेहरु पनि छन् ।
शालिक ढाल्ने तपाईले अहिले आएर शुभकामना दिनु भयो डाक्टर साहेब
— Ashish Gyawali (@agyawali) January 10, 2018
डा.एलिया अर्याल @aryalaliya
हरे शिव बाउरामको नाटक स्वस्थानीमा शिवले सतिदेवीको लास बोकेर बौलाउदै हिडेको नाटक भन्दा कम रोच भएन यिनको तान्डप पहिले पृथ्वीनारायण शाहका सालिक बाचेर हिडे अाज बोकेर हिड्दै छन हुन त चरित्र सकिएकि अाइमाइ र राजनीति सकिएको पुरुषले जे पनि गर्छ बोल्छ भन्छन।
Shankar Dahal @Dahal_Shankar
तपाईंको के कुरा पत्याउने ? हिजोको भ्रम थियो भनौं ? त्यसो भए आजको स्विकारोक्तीमा सत्यता कति छ ? दोहोरो कुरा गर्ने तपाईंले दोहोरो भूमिका खेल्नु भो । तपाईंको बिद्वतामाथि सन्देह छ, कसरी कुन ज्ञान आर्जन गर्नु भयो भनेर । मैले भुल गरें भनी स्विकार गर्न सक्ने आँट हुनु पर्‍यो डाक् साप ।
Sunil Sapkota @Sunilsapkota8
मुर्ती चाइ किन फुटाउदै हिड्यानि पैला
प्रकाश घिमिरे @prakash0099870
मति फिरेकै होर ? नत्र त हजुर हरुले जात जाती भन्दा माथी कैलेइ उठेको सुन्याथेन त
Biren Arya @birenarya
नेपाल जन्मजातै नेपाल बनेको होइन! नेपाल पृथ्वीनारायण नामका एक जनाको दुर दृस्टी ले बनेको हो! नेपाल एकीकरण नगरेको भए के अहिले नेपाल देश रहन्थ्यो ?
लक्ष्मण श्रेष्ठ @laxmanshre032
बल्ल हजुरको घैटोमा घाम लाग्न लागेछ खुसि लाग्यो ।।